Thu, Apr 2, 2020 at 6:16am
प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशपछि ओम्नी समूहसँग सम्झौता रद्द #आहा खबर# थोकमा घटेपनि खुद्रामा चार गुनाभन्दा बढी महँगो तरकारी #आहा खबर# टेलिकमले दियाे डाटामा बम्पर छुट #आहा खबर# चट्याङका कारण धादिङ र रुकुमपश्चिममा दुईको मृत्यु #आहा खबर# सावधान ! गन्ध वा स्वाद थाहा नपाउने सङ्केत कोरोना भाइरसको लक्षण हुन सक्छ #आहा खबर# स्वदेशी उत्पादनका जीवनरक्षक औषधि फयाक्ट्रिमै: अभाव सिर्जना हुँदा कालोबजारी शुरु #आहा खबर# विवादास्पद स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्झौता रद्ध #आहा खबर# स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरण: मन्त्री ढकालविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी #आहा खबर# स्वास्थ्य मन्त्रालयले समान खरिद गरेको कम्पनी दर्ता नै नभएको खुलासा #आहा खबर# वीर अस्पताल भर्ना भएका युवककाे मृत्यु #आहा खबर# क्वारेन्टाइनमै महिला हिंसा ! #आहा खबर# पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा बस्दै आएका आठ नेपालीमा कोरोनाको सङ्क्रमण #आहा खबर# फ्रान्समा एकैदिन ४९९ को मृत्यु #आहा खबर# कोरोना प्रभाव: थला परे एयरलाइन्स, पार्किङ खर्च धान्नै धौधौं #आहा खबर# चीनकाे उहान शहरमा आजदेखि मानिसको निर्वाध हिँडडुल शुरु, बजार पसल खुल्यो #आहा खबर#
आजदेखि माइक्रोसफ्टले विन्डोज ७ अपरेटिङ सिस्टमलाई सपोर्ट नगर्ने भएको छ । ११ वर्षदेखि प्रयोग हुँदै आएको विन्डोज ७ अपरेटिङ सिस्टमका लागि अपडेट तथा सेक्युरिटी प्याचेज उपलब्ध नगराउने माइक्रोसफ्टले बताएको हो ।
यसबाट लाखौं मानिसहरु प्रभावित हुने बताइएको छ । साइबर सुरक्षा विज्ञहरुले विन्डोज ७ युजर्सलाई आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम अपग्रेड गर्न आग्रह गरेका छन् ।
माइक्रोसफ्टले आज (मंगलबार) देखि विन्डोज ७ लाई सपोर्ट गर्न बन्द गर्दैछ । नयाँ प्रविधिलाई जोड दिन भन्दै माइक्रोसफ्टले विन्डोज ७ लाई सहयोग नगर्ने भएको हो ।
योसँगै विन्डोज ७ युजर्सले आफ्नो कम्प्युटरलाई सुरक्षित राख्न चाहिने महत्वपूर्ण सेक्युरिटी अपडेट तथा प्याचेज प्राप्त गर्न नसक्ने माइक्रोसफ्टले बताएको छ ।
वेभसाइटसम्बन्धी सूचना संकलन गर्दै आएको स्टाटकाउन्टरका अनुसार विश्वभर ४ जना विन्डोज युजर्समध्ये १ जनाले विन्डोज ७ प्रयोग गर्छन् ।
के अर्थ राख्छ नयाँ व्यवस्थाले ?
माइक्रोसफ्टले विन्डोज ७ अपरेटिङ सिस्टमभित्रको सफ्टवेयर बगलाई दुरुपयोग गर्न चाहने ह्यकरहरूका लागि क्याट एण्ड माउस गेम बन्द गर्दैछ । यदि कुनै ह्याकरले विन्डोज ७ मा त्रुटि फेला पारे भने त्यसलाई माइक्रोसफ्टले हटाउने छैन् ।
सफ्टवेयर र सेक्युरिटी अपडेट नहुँदा विन्डोज ७ प्रयोग भइरहेका कम्प्युटरहरू भाइरस र मलवेयर(खराब सफ्टवेयर)बाट संक्रमित हुन सक्ने माइक्रोसफ्टले बताएको छ ।
‘अनप्याच्ड कम्प्युटर प्रयोग गर्दा कोडमा रहेको त्रुटि कहिल्यै हट्दैन र यस्ता त्रुटिहरू देखिने र व्यापक रुपमा दुरुपयोग हुन सक्छन्’, ट्रेन्ड माइक्रोका सेक्युरिटी रिसर्च उपप्रमुख रिक फर्गुसनले भने, ‘तपाईंको अपरेटिङ सिस्टममाथि आक्रमण हुने संभावना उच्च रहन्छ ।’
प्रयोगकर्ताले क्यास्पर्सकाई ल्याबका वरिष्ट सेक्युरिटी अनुसन्धानकर्ता डेभिड एमले चाँडो भन्दा चाँडो सपोर्ट गरिएको अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
विन्डोज ७ प्रयोगकर्तासामु आइपर्न सक्ने जोखिमहरु
ह्याकरहरूले मलवेयर प्रयोग गरी कम्प्युटरमाथि हमला गर्न, हानि पुर्‍याउन वा निष्क्रिय बनाइदिन सक्छन् । योसँगै निजी तथा आर्थिक डाटा चोरी हुने, गोप्य रुपमा अन्य युजर्समाथि निगरानी हुन सक्ने र फिरौती नदिएसम्म कम्पनीको अपरेटिङ सिस्टम नचल्ने जोखिम उच्च भएको छ ।
सन् २०१७ मा बेलायतको नेशनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) माथि WannaCry नामक ह्याकिङ समूहले फिरौती माग्दै साइबर हमला गरेको थियो । सरकारले एक वर्षपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा एनएचएसको कोषले आफ्ना कम्प्युटर अपडेट गर्दै आवश्यक सेक्युरिटी प्याचेस लागू गरेको भए उक्त हमला रोक्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो ।
ह्याकरहरूले विन्डोज ७ को अनप्याच्ड भर्सनमा रहेको त्रुटि र केही हदसम्म माइक्रोसफ्टले सपोर्ट गर्न छोडेको विन्डोज एक्सपीको कमजोरी दुरुपयोग गर्दै हमला गरेका थिए ।
विन्डोज ७ प्रयोगकर्ताले के गर्नुपर्छ ?
माइक्रोसफ्टले सपोर्ट नगरेपनि विन्डोज ७ प्रयोग भएका कम्प्युटरले काम गर्नेछन् तर यस्ता कम्प्युटर थप असुरक्षित हुनेछन् । त्यसैले माइक्रोसफ्टले विन्डोज १० अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
‘अबदेखि आफ्नो कम्प्युटरलाई सुरक्षित राख्न विन्डोज १० गर्दा सबैभन्दा राम्रो हुनेछ’, माइक्रोसफ्टले भनेको छ, ‘ र विन्डोज १० लाई नयाँ पिसीमा प्रयोग गर्दा उत्तम हुनेछ ।’
विन्डोज १० लाई पुरानो पिसीमा इन्स्टल गर्न संवभ छ । तर पुरानो पिसीमा विन्डोज १० राख्दा राम्रोसँग काम नगर्ने माइक्रोसफ्टले बताएको छ । विन्डोज १० प्रयोग गर्नका लागि पिसीमा १ गेगा हर्ज (1 GHz)को प्रोसेसर, १६ जिबीको हार्ड ड्राइभ र १ जिबीको र्‍याम मेमोरी हुनुपर्ने माइक्रोसफ्टको भनाइ छ ।
तर विन्डोज ७ युजर्सले आफ्नो पिसीलाई अफलाइनमा प्रयोग गरेको अवस्थामा भने अपग्रेड नगरे पनि हुने माइक्रोसफ्टको भनाइ छ ।
बेलायतका अधिकारीहरूले विन्डोज ७ युजर्सलाई इन्टरनेट ब्याङ्किङ नगर्न र इमेल नपठाउन भनेका छन् । नेशनल साइबर सेक्युरिटी सेन्टरले यस्तो चेतावनी जारी गरेको हो ।
साथै सपोर्ट नभएको कम्प्युटर प्रयोगकर्तालाई चाँडो भन्दा चाँडो प्रतिस्थापन गर्न, संवेदनशील डाटा सपोर्ट भएको डिभाइसमा राख्न र यसलाई बैंङ्किङ तथा अन्य महत्वपूर्ण कारोबारमा प्रयोग नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
केही व्यवसायिक कम्पनीहरू विन्डोज ७ मा मात्रै काम गर्ने एप्लिकेशनमाथि भर परिरहेका छन् । विन्डोज ७ प्रोफेशनल वा विन्डोज ७ इन्टरप्राइजका लागि अपडेट प्राप्त गर्न कम्पनीले माइक्रोसफ्टलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सन् २०२३ सम्म सबै आकारका कम्पनीले विन्डोज ७ को विस्तारित सेक्युरिटी अपडेट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
तर कम्पनीका लागि नयाँ अपरेटिङ सिस्टम अपग्रेड गर्ने कार्य सधैं सहज नहुने फर्गुसनले बताए । ‘व्यवसायका लागि नभई नहुने एप्लिकेशन नयाँ अपरेटिङमा नचल्न पनि सक्छन् वा त्यस्ता एप्लिकेशन अपग्रेड गर्दा निकै पैसा लाग्न सक्छ’, उनले भने । विन्डोज ७ मा मात्रै चल्ने उपकरण जडान गरिएका अस्पताल तथा फ्याक्ट्रीले थप समस्या झेल्न सक्ने समेत फर्गुसनले बताए ।